Home News Faahfahino Dherad Ah aya Kaso Baxaya Qoyski Xalay Ku Sumoobay Mudaawadki Ay...
Faahfahino Dherad Ah aya Kaso Baxaya Qoyski Xalay Ku Sumoobay Mudaawadki Ay Isticmaaleyn
Warar Dheerad ah aya kaso baxaya qoys ku sumoobay dawo dhireed ay cusneen oo ay hali badan galisay qoyskaasi iyado waxyeeladaasi ay u geriyoodeen qaar ka mid ah qoryskasi.
Saddex caruur ah ayaa geeriyootay ka dib markii ay cuneen daawo direed sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka, waxaana sidoo kale asna isbitaal la dhigay Aabihii dhalay Carruurtaasi oo xaaladdiisa laga dayrinaayo.
Dhacdadaan ayaa waxa ay ka dhacday Xaafadda Tawakal ee Degmada yaaqshiid.
Dadka degaanka waxa ay xaqiijiyeen in Aabaha uu soo gadi jiray daawo dhireedka, ka dibna ay cuni jireen asaga iyo sidoo kale Caruurta, laakiin markii ay cuneen uu kusoo booday xanuun deg deg ah iyado hoyada qoyskaan ay iska diday cunista dawan sidasina ay ku bad qabto.
Waxa ila iyo hada an la ogeyn waxa sababay in qoyskaasi ay waxyelo kaso gaarto dawadasi iyado siyaboyin kala duwan lo micnenayo arintaasi.